Lloyd Kaufman Na-ekwu Na 'Onye Na-egbu Agbu' Onye na-akwụ ụgwọ 'Remake Script dị mma karịa nke mbụ
Home Akụkọ Ntụrụndụ ụjọ Lloyd Kaufman Na-ekwu Na 'Onye Mgbu Agbu Agbu' Remake Script dị mma karịa nke mbụ
Lloyd Kaufman Na-ekwu Na 'Onye Mgbu Agbu Agbu' Remake Script dị mma karịa nke mbụ
by Trey Hilburn III January 17, 2021
edere ya Trey Hilburn III January 17, 2021
Onye na-egbu egbu na-emezigharị na Legendary Entertainment. Ọ bụ ezie na ọtụtụ oge okwu na-emegharị ga-eme ka m were nzọụkwụ abụọ azụ, nke a yiri ka ọ nọ na ezigbo aka na ekele. Lloyd Kaufman's Troma Entertainment bụ ụlọ etinyere na ya Onye Na-egbu Mmadụ. Eziokwu ahụ bụ na Kaufman nwere nnukwu obi ụtọ maka nrụgharị na-abịanụ bụ ebe dị mma ịmalite.
Onye na-eme ihe nkiri na onye nduzi Macon Blair na-enye nkwado a. Dabere na Kaufman Blair maara ụlọ na ọpụpụ.
“Macon Blair maara Troma na Onye na-egbu egbu ka m mma. Ọ hụla ihe niile. Ọ hụla katoon ahụ, ọ hụla Halloween pụrụ iche, ọ hụla ihe niile. Ọ hụrụ ihe nkiri anyị n'anya dị ka Troma's War and Terror Firmer. Agụla m edemede ahụ ma ọ dị mma karịa nke mbụ m ga-ahapụrụ ya. Ọ bụrụ na akpọọ m, obi ga-adị m ụtọ ịwụli. Amụtara m na egwu ahụ ịhapụ ndị okike na ndị okike. Amụtara m ịhapụ ha ka ha jụọ ma ọ bụrụ na ha chọrọ m, anọ m ebe ahụ. ” Kaufman gwara Dread Central.
Macon Blair bụ otu n'ime ndị na-eme ihe nkiri ugbu a na m hụrụ n'anya ile anya. Blue ịla n'iyi, Ndị otu Murda na Green Room kpọrọ ihe niile dị ukwuu. Dude a na-elekọta Onye na-egbu egbu na-egosi na anyị nọ n’ezie ezigbo aka ebe a.
Nchịkọta nke Onye Na-abọ Ọrịa Na-abaghị Uru dị ka nke a:
Tromaville nwere nnukwu dike ọhụrụ. A mụrụ onye na-egbu egbu na-egbu egbu mgbe nwa nwoke dị nwayọọ Melvin dara n'ime nnukwu ihe mkpofu na-egbu egbu. Ugbu a, ndị na-eme ihe ọjọọ ga-atụfu ọtụtụ ihe.
Gini ka unu chere banyere ihe Blair tinyere na ya Onye na-egbu egbu? Mee ka anyi mara na ngalaba a.
John Carpenter na-abanye n'ime egwuregwu Podcast. Gụkwuo ebe a.
Lloyd KaufmanMacon BlairOnye na-egbu egbu
Trey tolitere na-etiti aisles nke ụlọ ahịa vidiyo. Mgbe usoro Cronenberg nke sitere n'ike mmụọ nsọ gasịrị, Ọ na-esonyere ya na fim na egwuregwu vidio. Ọ na-ede ihe niile na-ewu ewu, ma na-agbapụ shark abụọ na ndụ. Nye ya soro ma Tweet ya ihe na-adịghị ekpe ikpe @TreyHilburn.
'Ihe Na-awụ Mmiri' Agaghị Mwute na Returnlaghachi Maka Oge 2
Usoro HBO 'Onye Ikpeazụ Anyị' Na-achọta Onye Isi Maka Ọnọdụ Pilot